DEG-DEG: FIFA Oo Kansashay Abaal-marintii Sannadka Ee Xiddiga Adduunka Ee 'The Best 2020' Iyo Ballon d'Or Oo Go'aan Laga Gaadhayo - Jigjiga Online
HomeCiyaarahaDEG-DEG: FIFA Oo Kansashay Abaal-marintii Sannadka Ee Xiddiga Adduunka Ee ‘The Best 2020’ Iyo Ballon d’Or Oo Go’aan Laga Gaadhayo
Xidhiidhka kubadda cagta Adduunka ee FIFA ayaa kansashay abaal-marinta xiddiga adduunka ee FIFA The Best ee sannadkan 2020 la bixin lahaa, waxaana laacibka ugu fiican sannadka sii ahaanaya laacibka reer Argentine ee Lionel Messi.
Abaal-marinta oo bisha September ee sannadkan lagu qaban lahaa magaalada Milan ayey FIFA go’aan ku gaadhay in aan la bixinin la qabannin sabab la xidhiidha fayraska Korona, taas oo ka dhigan in labada laacib ee kaliya ee kusoo guuleystay ee Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi aanay cidina beddeli doonin, midkoodna aan la siin doonin oo sannad bannaan lagu qori doono.
Sida uu qoray Wargeyska Marca, Madaxweynaha FIFA ee Gianni Infantino ayaa go’aanka kansalaadda xafladdu uu kasoo fulay, waxaanu hore u sheegay in dadka aafadu saamaysay murugada lala qaybsan doono, dareenka caadiga ahna uu dhigayo in taxadarka ugu badan la sameeyo, taas darteedna abaal-marintii sannadkan la baajinayo.
FIFA ayaa hore u joojisay Koobka Adduunka haweenka ee ay da’doodu ka hoosayso 20 jirka iyo 17 jirka, waxaana loo riixay bisha February ee sannadka dambe, sidaas oo kalena waxa baaqday Koobka Adduunka ee kubadda Futsal oo 2021 loo riixay.
Tartanka kaliya ee ay FIFA maamusho ee aan la baajinin ayaa ahaa Tartanka naadiyada dunida ee bishii December lagu qabtay magaalada Abu Dhabi ee waddanka Imaaraadka.
Wargeysku waxa uu sheegay in maadaama intaas oo tartan la kansalay, sidoo kalena horyaallada dalalka ee xili ciyaareedkan ay hubanti la’aan yihiin, aanay jirin sabab sannadkan loo qaban karayo xafladda abaal-marinta xiddiga sannadka ee FIFA ee The Best.
Dhinaca kale, wargeyska France Football ayaa go’aan ka gaadhi doona abaal-marinta caanka ah ee xiddiga sannadka ee Ballon d’Or oo uu wargeysku si joogto ah u bixinayay tan iyo sannadkii 1956-kii.
France Football ayaa u madax-bannaan abaal-marintan oo aanay FIFA kusoo farogelin karin, maadaama ay laba sannadood ka hor kala baxeen oo xidhiidhka kubadda cagta Adduunku uu samaystay midda haatan la kansalay ee ‘The Best’.
UEFA ayaa sidaas oo kale uga madax-bannaan FIFA oo la filayaa in xiddiga sannadka ugu fiican qaaradda ay magaalada Monaco ku bixiso dhamaadka bisha August marka la samaynayo isku-aadka wareegga groups-ka ee Champions League.
Kabta dahabka ah ee Yurub ayaa iyadana shaki la gelinayaa, laakiin haddii uu dib u bilaabmo tartanka Champions League oo horyaalladuna dhamaadaan, waxay UEFA u bixin doontaa sidii caadiga ahayd.
Ciyaartoyda sida Kylian Mbappe oo safka hore ee saadaasha ku jiray ayaan kordhisan karin tirada goolasha uu ku tartamayo, maadaama horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 la kansalay oo PSG oo hoggaanka haysay koobka la guddoonsiiyey.
Akhriso: Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyga Ee Maanta Oo Arbaca Ah Ay Qoreen Wargeysada Yurub